သူမ ဘာကြောင့် ဘီကီနီ နဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြရတာပါလဲ? ဝမ်းဗိုက်မှာ အပေါက်ဖေါက်ပြီး အိတ်တပ်ဆင်ထားရသူ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ဆရာဝန် တစ်ဦးရဲ့ စိန်ခေါ်မှုမျာ - ဘဝဇာတ်စုံအဖုံဖုံ | NHK WORLD-JAPAN On Demand
သူမ ဘာကြောင့် ဘီကီနီ နဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြရတာပါလဲ? ဝမ်းဗိုက်မှာ အပေါက်ဖေါက်ပြီး အိတ်တပ်ဆင်ထားရသူ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ဆရာဝန် တစ်ဦးရဲ့ စိန်ခေါ်မှုမျာ
ထုတ်လွှင့်သည့်ရက် သြဂုတ်လ 3, 2021 ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မည့် နောက်ဆုံးရက် သြဂုတ်လ 3, 2022
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ အသက် (၄၂) နှစ်အရွယ် ဆရာဝန် Emma Otsuji Pickles ရဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် Emma ဟာ အူလမ်းကြောင်း မှာ ကုသဖို့ခက်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် အညစ်အကြေး စွန့်ဖို့အတွက် ဝမ်းဗိုက်ကိုဖောက် ပြီး စအိုအစား "stoma"အူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့အိတ် တပ်ဆင်ထားရပါတယ်။ အခု သူမဟာ ဗိုက်မှာ ဖေါက်ထားတဲ့ "stoma" ကို လှစ်ဖော်ပြတဲ့ ဘီကီနီ အလှမယ်အဖြစ်နဲ့ ကင်မရာရှေ့မှာ ကိုယ်ဟန်ပြလို့ နေပါတယ်။ သူရဲ့ဒီလို လုပ်ဆောင်မှုတွေက သူ့လိုဘဝတူ ဝေဒနာသည်တွေအတွက် အားအင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ကင်မရာရှေ့မှာ ဒီလို ကိုယ်ဟန်ပြဖို့ ဘယ်အရာတွေက သူ့ကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ဒီအစီအစဉ်မှာ နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။)
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက မီးစ် Emma ဟာ အစာမကြေတာ၊ ဝမ်းချုပ်လွန်းတာတွေကြောင့် ဆေးရုံကို အကြိမ် ၂၀ ကျော်တက်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့အသက် ၃၈ နှစ်ကျော်တဲ့အခါမှာတော့ ကုသဖို့ခက်ခဲလောက်အောင် နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တွင်းက အစာခြေအင်္ဂါတွေဟာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
မီးစ် Emma ဟာ ဂျပန်က တစ်ခုတည်းသော "stoma" အိတ်ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာကို ရောက်သွားပါတယ်။ "Ostomate" တွေအပေါ် လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှု ပိုတိုးလာစေဖို့ မျှော်လင့်ပြီး မီးစ် Emma က သူ့ရဲ့ ဂျာကင်အင်္ကျီကို ချွတ်ပြီး ဗိုက်မှာတပ်ထားတဲ့ အဲဒီအိတ်ကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေမှာ မီးစ် Emma ရဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ပုံရိပ်တွေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုသူတွေဆီက တုံံ့ပြန်မှု များစွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ "Ostomate" တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက မှတ်ချက်အများအပြား ရေးသားပေးပို့ခဲ့ ကြပါတယ်။